Arsenal oo guul ay u qalantay kaga soo gaartay Leicester City garoonka King Power… +SAWIRRO – Gool FM
(England) 28 Feb 2021. Arsenal ayaa guul ay u qalantay kaga soo gaartay Leicester City garoonka King Power, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 1-3, ciyaar qeyb ka aheyd kulamada toddobaadkan ee horyaalka Premier League.
Daqiiqadii 7-aad kooxda Leicester City ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta kaddib markii uu 1-0 ka dhigay xiddigooda Youri Tielemans.
Laakiin 40 daqiiqo marka ay dheesha mareysay naadiga Arsenal ayaa dhalisay goolka barbardhaca kaddib markii uu 1-1 ka dhigay David Luiz, waxaana goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Willian.
Daqiiqadii 45-aad Gunners ayaa loo dhigay rigoore waxaana gool u badelay weeraryahankooda Alexandre Lacazette, ciyaarta ayaana sidaas ku noqotay 1-2 ay ku hoggaamineysay kooxda martida aheyd ee Arsenal.
52 daqiiqo marka ay dheesha mareysay kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa sii dheereysatay hoggaanka dheesha waxaana 1-3 ka dhigay laacibkooda Nicolas Pepe.
Ugu dambentii ciyaarta ayaa ku dhamaatay 1-3 ay kaga soo adkaatay Arsenal kooxda Leicester City oo ay ku booqatay garoonka King Power, Gunners ayaa hadda fadhisa booska 9-aad ee kala sareynta horyaalka Premier League, kaddib markii ay uruursadeen 37 dhibcood.